Sheekh Al-Maqdasi Oo Soo Saaray Fatwo Ka Dhan Ah Kooxda Isugu yeertay ‘Dowladda Islaamiga’ [WARBIXIN] – Shabakadda Amiirnuur
Sheekh Al-Maqdasi Oo Soo Saaray Fatwo Ka Dhan Ah Kooxda Isugu yeertay ‘Dowladda Islaamiga’ [WARBIXIN]
January 13, 2019 3:05 pm by admin Views: 112
Mid kamid ah culimada Islaamka ee ugu caansan casrigan ayaa si adag kaga hadlay dagaalka ay kooxda iskugu yeertay dowlada Islaamiga ah ku hayso jamaacaatka jihaadiga ah ee halganka kula jira cadawga Islaamka.Sheekh Abuu Muxamad Al-Maqdisi oo ah caalim si weyn looga yaqaano dunida Islaamka ayaa ku tilmaamay beegsiga ay kooxda Daacish ku hayso Mujaahidiinta Afghaanistaan, Yemen iyo Soomaaliya in uu yahay dulmi ay ku kasbadeen oo Allaah uu iyagana bur-buriyo dowladii ay sheeganayeen, uuna gacantooda ka saaro dhulkii ay maamuli jireen ee qaybo kamid ah wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Sheekha oo maqaal ku qoray majallada Islaamiga ah ee “Al-falaax” ayaa intaas ku daray in Madaxda dawaaqiidda ah ay dulmi iyo jaraa’im waaweyn geystaan, balse dulmigaas ay geysanayaan aysan Allaah iyo diintiisa u saarinaynin islamarkaana dhiigga iyo cirdiga dadka ay ku xadgudbayaan aysan magaca Allaah ku samaynin, taasina ay keento in mararka qaarkood uu xukunkoodu in muddo ah usii jiro.
Hase yeeshee qaab sidaas ka duwan ayuu sheekhu sheegay in cid walba oo dulmiga ay samaynayso Allaah u nisbaysa islamarkaana ka dhigta wax uu isagu amray uu Allaah ka aargudanayo, xukunka iyo awooda ay sheeganayaan uu baabi’inayo islamarkaana uu ciqaabtiisa dunida ugusoo dedejinayo.
Sheekh Abu Maxamad Al-Maqdisi oo daliishanaya aayado Qur’aan ah iyo aqwaasha culimadii hore ee Islaamka ayaa hadalkiisa sii raaciyay in kadib markii uu arkay ficillada gurracan ee kooxdaa Daacish kula kacayso Mujaahidiinta Afghaanistaan, Soomaaliya iyo Yemen uu xaqiiqsaday in ay qaarkood ay xittaa kasii xunyihiin firqada Khawaarijta.
” Maanta oo ay dowladdii ay sheeganayeen kala daadatay, awoodoodiina ay kala dhantaalantaay Ayaan haddana waxaay arkaynaa in ay beegsanayaan dadka Mujaahidiinta ah ee ku sugan Yemen, Soomaaliya iyo Afghaanistaan, sidaasna waxaa ay hawl-fududeeyn ugu samaynayaan cadawga Islaamka si uu uga takhaluso dadkaas Mujaahidiinta ah” ayuu Sheekhu hadalkiina sii raaciyay.
Kooxdan iskugu yeertay dowladda Islaamiga ayaa gaalaysiisay dhammaan jamaacaatka jihaadiga ah ee cadawga dagaalka adag kula jira, kadib markii ay jamaacaatkaasi iska diideen in ay bayco la galaan Abu bakar Al-Bakhadaadi oo ah amiirka kooxdaasi.
Wixii intaas ka dambeeyay ayay kooxdaas Daacish waxaa ay bilowday weeraro ay ku qaadaan Jamaacaatka Mujaahdiiinta ah iyagoo banaystay dhiigooda, maalkooda iyo sharafkooda intaba.
Dhawaan ayay ahayd markii hoggaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab ay bayaan kasoo saareen kooxdaas, isla markaana wacad ku mareen in gacan bir ah la isaga qaban doono.
Culimada Mujaahidiinta ayaa sidaas oo kale uga hadlay kooxdan ka leexatay manhajkii suubanaa ee Mujaahidiinta, iyagoona ku baaqay in shartooda aanan lagu fiirsanin dadka Muslimiinta ah.
Sheekh Abu Maxamad Al Maqdisi ayaa hadalkiisa ku gabagabeeyay in xubnaha ka tirsan kooxdaas iskugu yeertay dowlada Islaamiga ah ay yihiin dad aanan caqli iyo xikmad toona lahayn, islamarkaana ficilkan ay samaynayaan uusan wax sal iyo raad ah diinta Islaamka ku lahayn.
Sheekha ayaa qoraalkiisa kusoo gabagabeeyay in marka uu u fiirsado ficillada guracan oo ay kooxdan kula kacayso dadka Mujjaahidiinta ah uusoo xusuusanayo hadalkii Allaah ee ahaa….” 🙁قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا”